Giriigga oo muhaajiriinta ula dhaqmaya si arxan darro ah | KEYDMEDIA ENGLISH
Giriigga oo muhaajiriinta ula dhaqmaya si arxan darro ah
Axaddii 13-kii February, xeebta Bodrum ee Magaalada Mugla ee Turkiga waxaa la qabqabtay 38 tahriibayaal oo saarnaa doon cinjir ka sameysan oo cilad ku timid kadib markii ciidamada Giriig dib ugu soo celiyeen Turkiga.
ATHENS – Ciidamada Ilaalada Xeebaha Turkiga ayaa sanadkii hore, soo badbaadiyay 23,676 muhaajiriin ah oo si sharci darro ah ku galay badda Aegean Sea iyo Mediterranean Sea. 15,794, oo tahriibayaashaas ka mid ah, waxaa dib-u-celin, jir-dil iyo khaarijin isugu daray ciidamda ilaalada xuduudka ee dalka Giriigga.
Sida lagu sheegay xog ka soo baxday Ilaalada Xeebaha Turkiga, Sannadkii 2021, wadar ahaan 619 dhacdo oo dad dib looga soo celshay xeebaha Giriigga ah ayaa la diiwaan galiyay, halka ay wali sii socdaan dhacdooyinka ceynkaan ah.
Todobaadki hore degmada İpsala ee gobolka Edirne ee waqooyi galbeed dalka Turkiga ayaa laga helay meydadka 19 tahriibayaal ah kuwaas oo qabow daran u geeriyooday kadib markii ay dib u soo celiyeen ilaalada xuduuda ee Giriiga.
Dhawaan, Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa ku baaqday in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo tacadiyada ay geystaan ilaalada Giriigga iyo inay bixiso magdhawga dadka ku naf-waayay barafoobidda.
Galinkii dambe ee Talaadadii, magaalada Mugla ee Koofur-galbeed Turkiga, waxaa la qabqabtay 111qof oo tahriibayaal ah iyo 2qof oo waday oo raaci rabay doon u socotay Talyaaniga, xogta la xariirta qabashada dalkaas ayaa sheegsa in qof kasta oo muhaajiriinta ka mid ahaa laga qaaday 7000 oo Yuuro.
Axadii 13-kii February, xeebta Bodrum ee Magaalada Mugla ee Turkiga waxaa la qabqabtay 38 tahriibayaal oo saarnaa doon cinjir ka sameysan oo cilad ku timid kadib markii ciidamada Giriig dib ugu soo celiyeen Turkiga.
Degmada Fethiye ee isla Magaalada Mıgla, Koofur Galbeed Turkiga 29 qof oo kale ayaa lasoo qabqabtay 14 February isniintii, halka Todobadii bishaan İsla magaaladaas lagu badbaadiyay 23 kale oo muhaajiriin ah.
Kumanaan qof oo ka kala yimid dalal kala duwan, kana soo qaxay dagaallo iyo colaado dalalkooda ka socda ayaa naftooda ku biimeeya inay gaaraan Yurub, inta badan waxay sii maraan Giriigga, balse waa dhamaandood ogyihiin in safarkaas halis yahay bad iyo barriba.
Caadiyan, Turkiga ayaa si joogta ah ugu eedeeya saraakiisha Giriiga inay si sharci darro ah dib ugu soo celiyaan muhaajiriinta xadka ka tallaaba, balse Athens ayaa mar kasta beenisa eedahaas, Giriigu, wuxuu ku andacoonaya in Turkigu uu indhaha ka qarsanayo dadka isku dayaya inay xudduudkiisa uga gudbaan Yurub.
Xoghayaha 1-aad ee Safaaradda Soomaaliya ee Turkiga, Khadar Cabdiqani, wuxuu dhawaan sheegay in tahriibayaasha Soomaaliyeed ee Dowladda Turkiga diiwaan galisay sanadkii dhamaaday ee 2021, ay gaarayaan ku dhawaan 5000 oo ruux oo cagaha dhigay xadka ay wadaagaan Jamhuuridda Turkiga iyo Jamhuuriyadda Hellas, [Greek]
C/llahi Abtidoon (Istambul)